Kpọọ maka ndị na-eme nchọpụta mmiri gbasara Africa - AfricArXiv
bipụtara Sam Dupont on 6th April 2021 6th April 2021
Iji wulite ikike nke ụlọ ọrụ Africa na nlekota na nyocha banyere ikuku acid, anyị na-eso ugbu a kesaa oku maka isonye site na Netwọk OA-Africa zigara ndị na-eme nchọpụta mmiri mmiri Africa.
Osimiri Acidification Africa (OA-Africa) bu netaneti pan nke Afrika kpokotara iji dozie ma kwalite mmiri mmiri (OA) mmata na nyocha na Africa. Ihe omumu ihe omumu banyere acidification nke oke osimiri na nsogbu ndi ozo na mpaghara Afrika na-emepe ngwa ngwa na nzaghachi doro anya nke ime ihe iji belata ma lebara nsogbu nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe na usoro anya anya. OA-Afrika bu ndi sayensi nwere mmasi ichoputa ihe banyere nleba anya na nleba anya nke oma na Africa ma ha bu ndi ozo. Global Ocean Acidification Na-ahụ Network
OA-Africa bu n'uche:
1. Gbaa mbọ hụ Africa nwere ike iguzogide ma mara ihe nwere ike iyi egwu na mwepu / usoro mmegharị dịnụ iji luso oke mmiri acidification.
2. ịzụlite otu netwọk nke ndị ọkà mmụta sayensị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye (1) ihe ọmụma nye ndị nwere oke na ndị na-eme iwu, (2) na-enye nduzi na ntụzi (3) ịhazi ọrụ metụtara nyocha na nyocha OA (4) chọpụta nkwado sara mbara maka mmụba nyocha na nyocha OA (5) na-akwalite ọganihu nke sayensị.
3. Kwadoro mmekorita n'etiti ndi sayensi, ndi nwere oke ochichi, na ndi na eme iwu iji wulite nghota nke mmekorita, ndu, na ihe nke aru na ihe putara na mmiri acidification.
Isi ihe oyiyi: oa-africa.net/
N'ime afọ 7 gara aga, anyị mepụtara mmemme ezubere iche iji nwekwuo ikike ịme nleba anya na nyocha nke mmiri na mba ndị ka na-emepe emepe. Anyị gbara ọsọ gbasara ọzụzụ 20, ruru ndị ọkà mmụta sayensị 400 wee nye ọtụtụ ụlọ ọrụ akụrụngwa.
Ocean Acidification ikike nwale
Ndi okacha amara nke acid achoputala ajuju iji choputa ihe ndi choro ma hazie ike ime ikike nke oge n’iru (akụrụngwa, ọzụzụ). Ihe omuma a gha abara ndi obodo Afrika n’adabere na ya ntuziaka. A ga-emepụta ma tinye ebe nchekwa data na-enweghị aha. Achịkọta ga-ejikọ aka na akwụkwọ ọcha OA-Africa nke na-elekwasị anya ndị na-eme iwu iji dọta ihe ndị na-eme nchọpụta mmiri acidic na Africa.
Isonye, ​​ikwesiri ibu onye oru na ulo oru ndi Africa n’eme oru banyere sayensi mmiri. Kwesighi ịrụ ọrụ ugbu a na ọrụ acidification nke oké osimiri. Ntụle a bụ inye nkwado maka ụlọ ọrụ nkwado ma bulie ohere ha ịmalite nyocha na nyocha banyere mmiri acidification na nso nso.
Biko dejupụta ajụjụ a; o kwesiri iwere ihe dika nkeji 15-20:
Gaa na ajụjụ a
Iji kwe ka anyị nyochaa ikike nyocha nke mmiri acidification gafee kọntinent ahụ, biko soro ndị ọrụ ibe gị kerịta ajụjụ a.
Ọ bụrụ na ị zararịị ụdị ajụjụ a gara aga, biko zaghachi ọzọ iji kọọ akụkọ ọganihu na oge.
Ike ụlọ Baịbụl hiwere isi n'ebe ndị a Osimiri Acidification International Coordination Center (OA-ICC)
Onye nkụzi ukwu na Prọfesọ Njikọ, Mahadum nke Gothenburg, Sweden
Tags: mgbanwe ihu igweNnyocha MmiriNkwado Oceanpịa